भारतले तोक्यो प्याजको निर्यात मूल्य ! हेर्नुहोस – mero sathi tv
भारतले तोक्यो प्याजको निर्यात मूल्य ! हेर्नुहोस
On १० मंसिर २०७४, आईतवार ०८:३५
भारतीय आन्तरिक बजारमा प्याज अभाव भइरहेका वेला निर्यात निरुत्साहित गर्न सरकारले प्याजको न्यूनतम निर्यात मूल्य तोकेको छ ।
यसअघि खाद्य तथा उपभोक्ता मन्त्रालयले प्याजको मूल्य ७ सय डलर प्रतिटन तोक्न वाणिज्य मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिले बजारमा प्याजको व्यापक अभाव देखिएको भन्दै समाधानका लागि सरकारले निर्यात निरुत्साहित गर्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेको भन्दा पनि १ सय ५० डलर थप गरी न्यूनतम मूल्य तोकेको होे । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
बाजुरामा एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताबिच खुकुरी हानाहान, घाईते दुइजनालाई उपचारका लागी हेलिकप्टरबाट धनगढी लगियो
धुर्मुस सुन्तली फर्किए नेपाल, एयर्पोर्टमा छोरी सङ्ग भेट्दाको मिठो क्षण